DAAWO: Ciidamada J/Land oo qaaday howlgalo guuleystay, soona bandhigay meydadka 18 dagaalame. – Puntlandtimes
DAAWO: Ciidamada J/Land oo qaaday howlgalo guuleystay, soona bandhigay meydadka 18 dagaalame.
September 21, 2018 W LAASCAANO
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa amar ku bixiyey in weerar culus lagu qaado labo goobood oo kuyaala gobalka Jubbadda Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad katirsan kooxda Argagixisada ee Al- Shabaab, waxaana goobahaas lagu dilay in ka badan 18 dagaalame oo katirsanaa kooxdaas.
Wararka ayaa sheegaya in ay howlgalkan ciidamada Jubbaland qaadeen, ka dib markii la ogaaday in ay isku dayayaan in ay weeraro ku qaadaan saldhigyada ciidamada maamulkaas.
Warbaahinta JubbalandTv ayaa tabisay in weerarka qorsheynaa laga gaaray hadafkii laga lahaa, lana burburiyey labo Saldhig oo ay kooxahan ku sugnaayeen, lana dilay in ka badan 18 Dagaalame, kuwaas oo katirsanaa kooxda Al- Shabaab.
Xogaha la helayo ayaa cadeynaya in ka hor intii uusan bilaaban weerarkaas ay ciidamada Jubbaland ogaadeen macluumaad dhameystiran oo la xariira is aruursiga iyo ku sugnaanshaha goobahan ee kooxaha Argagixisada ah.
Ciidamada Jubbaland oo kaliya ayaa la xaqiijiyey in ay fuliyeen weerarkan, waxaana muuqanaysa in ay Jubbaland hadda isku diyaarinayso howlgal dhameystiran oo ka dhan ah kooxda Argagixisada ah ee Al- Shabaab.
Jubbaland waxay bilowday duulaan lagu qaadayo kooxahan ka soo horjeeda Amniga iyo daganaanshaha dalka, halka dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ay kasoo horjeedo howlgaladan oo ay faragalin ku sameynayso howlgaladan.
beenta so aaqiro lagu qabsado kama baqeysid waxa dagalka qaday danab dowlada federalka iyo marekan waxan hada so qori jirtay warkaga lama aamin doono